Njalo wesithathu German uyazicabangela cryptocurrencies njengenhlangano utshalomali - Blockchain Izindaba
Nakuba Bitcoin, Ethereum and Co. beshaywa kanzima ngenani ukwehla muva, udumo lwawo ayenzanga lutho ukubalimaza. Linani selilonkhe lebantfu labange 29 amaphesenti izakhamuzi German ukubona lwemali digital njengenhlangano utshalomali ezithakazelisayo. Ucwaningo omele umongo IPosi Isifundo Digital 2018 okwenzeka phakathi kuka-February futhi ekupheleni kukaNdasa, ie ngokushesha emva intengo ngezinye izikhathi ebukhali kakhulu awe zezimali digital. Ngokuqondene, ngokuzijamela izinhlelo zokulawula zezimali nangethemba uyabuya okusezingeni eliphezulu banethonya lwaya okukhulu ku amaJalimane. Inzalo ka-amaJalimane abasebasha futhi sayinwe affine is ikakhulukazi liphinyiselwe. Eqenjini nobudala 18 futhi 34, cishe umuntu oyedwa kwababili e (46 amaphesenti) is abanesifiso cryptocurrencies njengenhlangano utshalomali – naphezu kwemibiko ngokuvamile omubi.
khona Abezindaba kwandisa inzalo Bitcoin and Co
Ngonyaka odlule, cryptocurrency amazinga basuke esigidini esisodwa irekhodi okusezingeni eliphezulu elandelayo, kodwa kusukela ekupheleni 2017, intengo Bitcoin, esetshenziswa kakhulu cryptocurrency, uwile ezingaphezu kuka 65 amaphesenti. Abezindaba babika kabanzi ngokufundwa kwezinkanyezi ekushintshashintsheni intengo nabameleli eziningi umkhakha ukukhuluma izixwayiso; ezifana Deutsche Bundesbank noma German lwezezimali Supervisory Authority Bafin. Amazwi ochwepheshe, ngubani wayekubikezele revolution ibhizinisi utshalomali ngu cryptocurrencies, futhi baba ezinokuthula kakhulu.
“Kuyaphawuleka ukuthi amaJalimane kukhona namanje nesithakazelo cryptocurrencies njengendlela yokutshala imali zezimali naphezu ukulahlekelwa okusezingeni eliphezulu nezingozi esobala,” Dr uthi. Thomas ukushoda, IPosi Chief Digital Officer. “Kukhona Ngokuqinisekile ingozi yangempela ukuthi abantu bazolahlekelwa imali nje ngoba ukulandela hype.” Bitcoin kwaba cryptocurrency kuqala 2009, futhi manje kunezinhlobo ezingaphezu kuka 1,500. Endlalekile ukuphathwa idatha kanye yezifiso cryptographically kuvikelwe ukudala digital ukuthengiselana lokukhokha ngaphandle iziphathimandla emaphakathi ezifana namabhange.
Abesifazane zikhanga uhlelo ukuzimela, amadoda amathuba ukubuya
Kuyinto ikakhulukazi ukuzimela obuku izinhlelo zezimali ukuthi owuthanda amaJalimane mayelana cryptocurrencies. Lesi sici kakhulu ezibaluleke kakhulu kwabesifazane (60 amaphesenti) kunokuba amadoda (51 amaphesenti). Ithemba ukubuyiselwa okuthiwa okusezingeni eliphezulu, Ngokolunye uhlangothi, ikakhulukazi ecasula amadoda (56 amaphesenti kuqhathaniswa 36 abesifazane abangaba amaphesenti angu). Ukuze zonke fan wesithathu cryptocurrencies, Ukuzifihla nakho kubalulekile. Ngokungafani, Ngokwesibonelo, ukwabelana yenkampani, abazimele okuthandwa. With uyiphatha ngesandla cryptocurrencies kungekho isisebenzi sasebhange noma nomthengisi siqonde edepho. Ngoba wonke umuntu yesihlanu nesithakazelo, kukhona izizathu yimizwelo njengokucindezeleka amaphuzu injabulo kanye “igolide digger umuzwa” imali ifomu kuqhathaniswa entsha ye utshalomali digital.
Okujabulisayo nabantu abasha enkulu ikakhulukazi
Isinyathelo esikhuthaza ukutshalwa kwezimali kwenziwa ikakhulukazi abantu abasha. Ngezinye amaphesenti ayisithupha, abomdabu digital babe cryptocurrencies eziphindwe kabili kunango labantu isilinganiso. Ngo ezayo izinyanga eziyishumi nambili, esinye 14 amaphesenti 18- eneminyaka engu-34 kuya kwengu-usafuna sikhule cryptocurrencies. Ngaphesheya bobudala, lena amaphesenti ayisishiyagalombili kuphela. “Naphezu kwazo zonke lezo lwaya, zimali abasha akumele sikhohlwe izipesheli kusukela ohlelweni oluthile olumisiwe yasebhange. Noma ubani kakade kwenza investimenti e izibambiso njengenhlangano utshalomali Ngokuqinisekile, akufanele ukutshala cryptocurrencies ngenxa izingozi okusezingeni eliphezulu abathintekayo. Ngenxa yokuthi loluhlobo utshalomali eziqagelayo, “uyaqhubeka Thomas Mangel.
Ulwazi mayelana namathuba nezingozi kungenzeka overestimated
I okusezingeni eliphezulu intengo yawo eguquguqukayo cryptocurrencies kanye izinhlelo by ýkhasýmende emtsetfweni noma amazwe ukusungula cryptocurrencies zabo ziye zaholela okwandile labezindaba. Imiphumela cwaningo ibonisa ukuthi lokhu kuba khona abezindaba kuholela amaJalimane abaningi ukuba baphethe ngokuthi abazijwayele cryptocurrencies – ngoba kakade abakufunde noma wezwa ngakho konke ngabo. 20 amaphesenti amaJalimane qinisa ngokwabo ulwazi oluhle noma okuhle kakhulu cryptocurrencies. Abomdabu digital izizwa ivikelekile ngisho noma kunesizathu: 29 amaphesenti 18- eneminyaka engu-34 ubudala bazibheke “mfihlo Ongoti”.
“Ngenxa hypes abezindaba, abantu abaningi overestimate nolwazi lwabo lwezinkanyezi ababezinikele amathuba nezingozi cryptocurrencies njengenhlangano utshalomali,” uxwayisa Thomas Mangel. Ngokwesibonelo, abaningi babengeke babe bazi ukuthi inzuzo kusukela cryptocurrencies kudingeka okwakumelwe zikhokhelwe intela ngokugcwele uma kungukuthi agcinelwe ngonyaka okungenani. Ngaphezu kwakho konke, ingozi ukulahleka Imininingwane, okuyinto akusingokweminyaka nokutshalwa kwezimali kweminye imikhakha kuleli fomu, alinikwa ukucabangela ngokwanele. Noma ubani ongathanda ukutshala cryptocurrencies, Nokho, uyalwa ukuba akhethe kuphela isamba wokuthi zingenza ngaphandle.
ukwaziswa okuyisizinda IPosi Digital Isifundo 2018 – The Digital German kanye Imali
Esikhathini esiyiminyaka kusuka February kuya March walo nyaka, 3,100 AmaJalimane kwaxoxwa ngokuba IPosi Digital Isifundo 2018 – The Digital German kanye Imali. Ngokokuqala wesine ilandelana, cwaningo IPosi sika uhlola ezenzekayo ziya abasafufusa ezindaweni ezihlukahlukene zokuphila German maqondana Digitisation ezihlokweni jikelele kanye zezimali ngokukhethekile. Ukuze zibonisa isakhiwo labantu-omele, isampuli ukuthi isisindo by wombuso (proportionalization), ngobudala nobulili. Ifayela eliyisethenjwa yayisekelwe Census 2011 Federal Statistical Office. Imiphumela zimikiswa tinombolo letiphelele. Ngeziphambeko sonke zingachazwa ngezinqubo umehluko ukubopha.
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 10.06.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 11.06.2018
Kylie Terrezza uthi:
Juni 19, 2018 ngesikhathi 5:09 PM
kwesigaba ekhangayo okuqukethwe. Ngisanda bakhubekile lapho kuwebhusayithi yakho ukubusa capital bagomela ngokuthi engikuzuzayo eqinisweni wajabulela akhawunti emaposini. Kunjalo ngizobe ku- Khulisa yakho ngisho mina impumelelo ufinyelela njalo ngokushesha.
Julayi 21, 2018 ngesikhathi 7:31 PM
Amazing! Isiphakamiso sayo empeleni amangalisayo, Ngiye got umbono ocacile kakhulu ngesihloko kulokhu okuthunyelwe.
Septhemba 5, 2018 ngesikhathi 2:31 PM
Ngangivame ukuba Kunconywa le webhusayithi ngu umzala wami. Angikho omuhle yini noma cha lesi uhambise kulotshiwe ngendlela kuye njengoba akekho omunye wazi ezifana esiqokiwe cishe Inkinga yami.
Wena Amazing! Ngiyabonga!
Septhemba 7, 2018 ngesikhathi 5:20 AM
Njengoba admin yaleli sayithi usebenza, ngokucacile ngokushesha kakhulu kuyoba bodumo, ngenxa ekuqukethe izinga.
Septhemba 9, 2018 ngesikhathi 9:03 AM
Zisuka nje ngivele Ngiyahamba ukwenza isidlo sami, lapho kokudla kwasekuseni yami ngiza futhi ukufunda izindaba okwengeziwe.